भेरोसेलको दोस्रो मात्राको खोप असार २२ गतेदेखि दिइने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भेरोसेलको दोस्रो मात्राको खोप असार २२ गतेदेखि दिइने
काठमाडौँ — सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई असार २२ गतेदेखि दोस्रो मात्राको खोप दिने जानकारी गराएको छ ।
भेरोसेलको पहिलो मात्रा यही जेठ २५ गतेदेखि २९ गतेसम्म देशभर दिइएको थियो । ६० देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका नागारिकलाई भेरोसेलको पहिलो मात्रा खोप पाएका थिए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखा प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले पहिलो मात्रा लगाएका ३ लाख ७० हजार नागरिकलाई दोस्रो मात्राको खोप दिइने बताए ।
प्रकाशित : असार ११, २०७८ १५:०४
धरानमा कोरोनाबाट ३ जनाको मृत्यु
असार ११, २०७८ प्रदीप मेन्याङ्बो
सुनसरी — धरानमा ३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कोभिड–१९ अस्पतालमा उपचाररत अवस्थामा धरानका ३ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो ।
प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चुडामणि पोखरेलका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा एक महिलासहित तीन जनाको मृत्यु भएको हो । मृतकहरुमा धरान–११ बस्ने ७५ वर्षीय वृद्ध पुरुष, धरान–१३ बस्ने ४३ वर्षीया महिला र धरान–५ बस्ने ७९ वर्षीय वृद्ध पुरुष रहेका छन् । प्रवक्ता डा. पोखरेलका अनुसार असार ३ गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि असार ७ गते कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएका वृद्धको बिहीबार दिउँसो एक बजे मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्यु भएको दुई घण्टापछि ४३ वर्षीया महिलाको पनि मृत्यु भएको थियो । उनलाई बिहीबारै कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।
७९ वर्षीय वृद्ध पुरुषको मृत्यु शुक्रबार बिहान ४ बजेर ५ मिनेटमा भएको थियो । उनलाई बिहीबार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको र सोही दिन कोभिड अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । मृतक तीन जना पहिलेदेखि दीर्घरोगी रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट धरानमा मृत्यु हुनेको संख्या योसँगै ६९ पुगेको धरान उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख उमेश मेहेताले बताए ।
लामो समय निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिए पनि दुई सातायता धरानमा दैनिक ५५ जनादेखि ६० जना संक्रमित देखिएका छन् भने दैनिक एकजनाको मृत्यु हुने क्रम जारी छ । बीपी प्रतिष्ठानका संक्रामक रोग विशेषज्ञहरुले भने पछिल्लो एक सातायता जिल्लामा गरिएको निषेधाज्ञा धेरै खुकुलो हुँदै गएकाले कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्यु दर फेरि बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रकाशित : असार ११, २०७८ १४:५०